Ka caddeynta Yahoo! | Martech Zone
Isniin, Oktoobar 29, 2007 Khamiis, Juun 18, 2013 Douglas Karr
Saaka waxaan ku yaalay a foomka dalabka emaylka badan ee Yahoo! Uma muuqato mid xoogan sida barnaamijka oo ah AOL postmasters ayaa u diyaarshay codsigooda Whitelist laakiin waan ku faraxsanahay inaan ugu dambeyntii helo mid!
Qaar ka mid ah talooyinka ka hor intaadan dalban:
U hubso inaad leedahay dib u eegis DNS ah oo karti u leh Cinwaanka IP ee aad ka soo dirayso. Yahoo! ogow Cinwaanka IP-ga ee aad ka diri doontid foomka gudbinta (aagga dheeriga ah).
Hubso inaad hayso jawaab celin ku saabsan ISP si ay uga jawaabto farriimaha arrimaha leh (tusaale ahaan abuse@yourcompany.com) oo aad cinwaan cinwaan ugu dejiso "Khaladaadka-Ku:" cinwaanka emaylkan. Yahoo! ogow jawaabtaada loop cinwaanka emaylka ee foomka gudbinta (aagga macluumaadka dheeriga ah).
Hubso inaad ku darto cinwaanka shirkaddaada oo dhan, magaalada, gobolka, zip, lambarka taleefanka iyo lambarka fakiska ee aagga macluumaadka dheeriga ah sidoo kale.
Haddii aad diraysid tiro badan oo emayl ah, waxaan kugula talin lahaa inaad gasho liiska liiska Yahoo! iyo AOL. Liistada liiska caddaanku kuma damaanad qaado inaad sameyso sanduuqa sanduuqa, waxyaabaha ku jira ayaa wali kugu heli kara shaandhada spam. Qofka whitelist kaama hor istaagi doono inaad xannibaadda ka hesho, sidoo kale, laakiin wuxuu ku siin doonaa caymis yar oo dheeraad ah oo aan dhici doonin.
Difaaca ugu fiican ee aan lagu qorin liiska madow waa ka saarista cinwaannada e-maylka ee liiskaaga, marwalba hel oggolaansho, had iyo jeerna u soo dir e-mayl wakhti habboon - una dhigma markii aad weydiisatay rukhsadda. Anigu ma ihi la-taliye badbaadin - laakiin waxaan haystaa saaxiib wanaagsan oo kan i caawiya oo igu toosiya waxyaabahaan!
Nov 26, 2007 saacadu markay tahay 11:24 PM
Nasiib wacan, waad u baahan doontaa. Dadka badankood waligood ma maqlaan wax ku saabsan codsiyadooda. Aniga shaqsiyan waxaan gudbiyay araajida dhamaan ururada kaladuwan, mudo kabadan hal sano, jawaab kali ah malahan. Sida muuqata tani waa dhaqammo ganacsi oo caadi ah Yahoo. Waxaan raacnaa dhammaan hababka ugu wanaagsan ee warshadaha oo xitaa waxaan kula saxiixannaa dhammaan emayllada bixiya DK iyo DKIM… weli wax guul ah ma lahan. Hubso inaad dib u dhigatid haddii lagaa aqbalo !!
Febraayo 12, 2008 saacadu markay tahay 3: 40 AM
Way fiicantahay markii aan isku dayay dabayaaqadii sanadkii hore waxaan ka helay jawaabta Yahoo oo markii dambena waan ku caddeeyey.
Si kastaba ha noqotee, maaddaama ay jiraan isbeddelo ku saabsan cinwaanka IP-ga, waxaan markale isku dayay nasiibkeyga umana muuqan inay shaqeynayaan. Foomka sidoo kale waa laga qaaday!